Daloolida dhagaha ee ragga: noocyada, talooyinka iyo qalabka! | Ragga Stylish
Helitaanka daloolinta dhagtu waa dhaqan iyo mood, laakiin waxaas oo dhan ka sarreeya waa qaab muujin. Sida dhammaan isbeddelka jirka (tusaale ahaan, tattoos), daloolin ayaa kuu oggolaaneysa inaad dibadda u soo baxdo jabhadnimadaada iyo hal-abuurkaaga.
Fursadaha loogu talagalay daloolinta dhagaha waa isku mid qof kasta, iyada oo aan loo eegin jinsiga, waana sidan soo socota:
Hirarka hore (D)
1 Daloolin miskaha
2 Daloolinta Kareemka
3 Dhageysyada ugu fiican ee ragga
3.1 Waa maxay waxyaabaha ugu fiican?
Waxaa jira saddex nooc oo daloolin goobeed. Astaamaha dhegaha la xushay ayaa muhiim ah. Tusaale ahaan, dilaaliyeyaashu waxay bixiyaan feer, saameyn kale. Sidoo kale waa inaad go'aan ka gaartid inaad daloolin lahayd hal laf ama labadaba. Mid waa bilow wanaagsan, laakiin haddii aad jeceshahay sumadda, aakhirka waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale hesho dhegta kale. Ma aha oo kaliya sababaha isku midka ah, laakiin sababta oo ah daloolinta waxaa loo aaneeyaa tayo qabatin leh.
Heerka caadiga ah (A)
Dusha sare (B)
Wareegga wareega (C)
Midda ku taal aagga dhexe ee laf-dhabarku waa daloolida dhagaha ee ragga. Sidoo kale waa daloolinta in dilaaga la dhex gelinayo, nooc dahab ah oo ballaarin kara daloolka dhegta oo kaliya dhowr milimitir illaa dhowr sentimitir. Waa isbeddel ku yimid millennials-ka, in kasta oo ay jiraan dad ka ab ka ab soosocda oo iyaguna ku labista qaabab badan. Oo da'daasina caqabad kuma aha nooc kasta oo dalool ah.
Daloolinta laf-dhabarta sare waxay ku taal qaybta sare ee iyada. Badanaa waxaa lagu daraa daloolinta maqaarka ee caadiga ah. Ugu dambeyntiina, daloolinta dhagta ee mareysa qaybta ugu dhumuc weyn ee lob, halkii hore iyo gadaalba, waxaa loo yaqaan 'transversal'. Tani way ku yar tahay, sidaas darteed Wareejinta waa fikrad aad u xiiso badan haddii aad jeclaan lahayd inaad xirato dalool kaa soocaya inta kale.
Marka laga reebo aagga, dhammaan daloolka dhegta waa inay maraan carjawda (helix, warshad, daith…). Xanuun badan ka sokow, waxay u baahan tahay dulqaad badan. Halka kuwii hore si dhakhso leh u bogsadaan (4-6 toddobaad), Daloolinta carjawda waxay qaadan kartaa 3-6 bilood si ay caadi ugu soo noqoto, iyo mararka qaarkood xitaa in ka badan, iyadoo kuxiran nooca daloolinta. Tani waa sababta oo ah waxaa yaraaday socodka dhiigga ee kilyaha.
Inta lagu jiro waqtigan waxaa muhiim ah in la ilaaliyo nadaafadda (waxaa lagugula talinayaa inaad ku nadiifiso laba jeer maalintii xalka cusbada), la soco habka bogsashada iyo wixii ka sarreeya oo dhan ha beddelin dhegaha, maxaa yeelay taasi waxay kordhisaa halista diidmada iyo infekshinka.
Dhegtaada ayaa laga yaabaa in xoogaa xanuun ah marka aad madaxa ku dhigeyso barkin dhinacaas wejiga ah. Sidaa darteed haddii aad qorsheyneyso inaad carjawda ka dalooliso dhagta kale sidoo kale, tixgeli inaad sugto illaa inta ugu horreysa ay si buuxda u bogsato. Haddii kale, habeenkii way adkaan kartaa in la helo boos raaxo leh.
Dhageysyada ugu fiican ee ragga
Taabashada shaqsiyeed waxay u egtahay inay kasbato dhibco qaab. Iyo daloolinta dhagaha ayaa ka mid ah qalabka ugu waxtarka badan ee arrintan la xiriira. Markay tahay wejiga, isku dar dalool (midkood dhegta, sanka ama meel kale) gadhka iyo taabashada lagu sameeyo dhadhanka wanaagsan ayaa kaa caawin kara inaad sameyso sawir casri ah oo hadda socda.
Jaangooyada, warshadaha, helix iyo wareega wareega ayaa loo arkaa meelaha ugu fiican ragga. Laakiin u helida shaqadu maahan wax ku saabsan nooca daloolinta sida qaabka dhegaha laftiisa.
Guud ahaan, ragga waxay xirtaan daloolin ka waaweyn oo ka culus in dumarka. Naqshad fudud oo adag oo madow ama qalin ah waa sharad aamin ah. Tusaale ahaan, baal madow oo caadi ah, giraanta, ama furitaanka fiilada. Dhameystirka tilmaamaya adkeynta. Si kastaba ha noqotee, waxay kuxirantahay dookhaaga shaqsiyeed. Haddii aad doorbideyso wax khiyaano badan ama midab leh, ma jirto sabab aan loo xirin.
Waa maxay waxyaabaha ugu fiican?
Dhaawacyo ayaa laga sameeyaa waxyaabo kala duwan. Xulo titanium-ka hypoallergenic Haddii aad rabto inaad hubiso inaad xirato daloolin dheg ah adigoon wax falgal xasaasiyadeed u keenin, maadaama kuwani ay aad ugu yar yihiin waxyaabahaan. Midda labaad ee badbaadada waa bir bir ah.
Qalabka dabiiciga sida alwaax ayaa sidoo kale loo isticmaalaa fidinta. Burburinta alwaaxda ayaa ka fudud kan birta ah. Mid kale oo ka mid ah faa'iidooyinkeeda ayaa ah, sida muuqata, waxay baabi'isaa urta xun iyada oo ay ugu wacan tahay daaqadiisa. Suuqa wuxuu bixiyaa noocyo badan oo ka mid ah wax ka alwaax alwaax ah, ha ahaato nooca alwaax iyo naqshadeynta. Waana taas, si ka duwan qalabka intiisa kale, tani waxay u oggolaaneysaa inay ku qabato ficil ahaan ujeeddo kasta oo naqshadeeye la yimaado, laga bilaabo mandalas ilaa dhakada, isagoo maraya astaamaha majaajillada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Noocyada daloolinta dhagaha ee ragga
Sida loo xirto surwaal cagaaran